Global Voices teny Malagasy » Taratasim-pifandraisana RV : Fanamafisana ny feon’ireo mpikatroka ho an’ny fiteny manerana an’i Azia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Aogositra 2019 2:55 GMT 1	 · Mpanoratra Yanne C Nandika avylavitra
Ny sarimborona Tweet, avy amin'i Id-iom  ary nampiasàna ny lisansa CC BY-NC 2.0 Creative Commons .
Fanamarihan'ny Rising Voices : Ny taratasim-pifandraisantsika isaky ny roa herinandro dia famintinana ireo lahatsoratra nivoaka vao haingana tao amin'ny bilaogy momba ireo rehetra endriky ny fampiatiana nomerika, ka hita ao ny fidirana sy ny fanekena ireo fitaovana dizitaly, hatramin'ny fomba sy fahafahana isankarazany ho an'ireo vondrompiarahamonina mba handraisan'izy ireo anjara feno ety anaty tambajotra. Vakio ato  ireo famoahana tany aloha tamin'ity taratasim-pifandraisana ity.
Ny 9 Aogositra no Andro Erantany natokana ho an'ireo Vazimba Teratany. Mba hiarahana amin'izao tontolo izao hankalazana io andro manokana io, nifanolo-tànana tamin'ny Digital Empowerment Foundation  sy ny O Foundation  ny Raising Voices hanao ny fanentanana amin'ny fifandimbiasana mitantana ny kaonty Twitter iray  hampitàna ny feon'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany Aziatika ho fantatry ny mpamaky antsika.
Subhashish Panigrahi, mpikambana iray ato anatin'ny vondrompiarahamonina Global Voices no sady mpiara-manorina ny O Foundation, no ho vahinintsika voalohany hampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline , manomboka ny 6 Aogositra ary hizara ireo olana, fanamby sy hatramin'izay rehetra azo atao ka hitany teny am-piasàna niaraka tamin'ireo vondrompiarahamonina natao an-jorom-bàla tao Azia Atsimo. Ankoatra an'i Subhashish, handre ihany koa ianareo avy amin'ireo vondrona samihafa mpampiantrano hiresaka momba ny asan-dry zareo amin'ny fampiroboroboana ny fiteny, toy ny Eastern Tharu, Sherpa, sy fitenim-bazimba teratany maro hafa manerana an'i Azia. Aza misaraka aminay azafady !
Ho an'ity laharana ity, tianay ianao hahafantatra ireo mpampiantrano roa vao haingana amin'ny tetikasanay kaonty Twitter ifandimbiasana momba ny fikatrohana nomerika ho an'ny afrikàna (@DigiAfricanLang ). Tiana ny hisaotra an'i Kpénahi Traoré  tamin'ny nizaràny tamintsika ny asany ho an'ny fiteny Bambara ary Christian Bwaya  tamin'ny asany ho an'ny fiteny Swahili. Mangataka anao hamaky ireo lahatsoratra Q&A mba hahafantarna mismisy kokoa momba azy ireo sy ny asan-dry zareo!
Mbola ato anatin'ity laharana ity ihany koa, tianay ny hanolotra anareo ireo telo nomena fanasàna vao haingana hampiantrano no @ActLenguas  — mpikatroka nomerika ho an'ny fiteny avy ao Amerika Latina. Victoria Gimena Tinta Quispe  [es] (Aymara, fitenin'ireo vahoaka Aymara any Andes), Genner Llanes Ortiz  [es] (Mayan avy amin'ny Yucatán, Meksika), ary Manuel Nichim Ch'en (Manuel de Jesús Pérez Pérez)  [es] (Tsotsil avy amin'ny Chiapas, Meksika). Ao anatin'ny lahatsoratra manolotra ny mombamomba azy ireo, ho fantatrareo misimisy kokoa ny momba an-dry zareo sy ny asany ho famelomana aina/fampiroboroboana indray ny tenindrenin-dry zareo.
Ary raha toa ianareo liana amin'ny fomba fanampian'ny Aterineto sy ny teknolojia ireo ezaka ho famelomana indray ireo fitenin-dReny Amerikàna sy ireo FirenenaVoalohany tao Amerika, ilainareo ny mijery izay nolazain'ireo mpampiantrano vao haingana ny @NativeLangsTech  momba ny asa fikatrohana nomerika nataony ho an'ireny fiteny ireny. Atolotray ho anareo ny lahatsoratra Q&A iray am-bilaogy niarahana tamin'i Margaret Noodin  (ho an'ny fiteny Anishinaabe tenenina ao amin'ny faritr'i Minnesota-Wisconsin ao Etazonia).
Ho avy amin'ny 2020 io ny Fihaonana ho an'ny Daholobe ataon'ny ICANN67 ary ny fisoratana ho amin'ny fandaharanasany Fifanohanan'ny Mpiray Asa ICANN dia efa misokatra. Raha liana ianareo amin'ny hetsika momba ny Anaran-tSehatry ny Rafitra sy ny fahamarinantoerana/fiarovana ny aterineto erantany, ho anao indrindra izy ity. Miangavy anao hijery ny antsipirihany ato . Fetra fandraisana ny fisoratana: 18 Aogositra 2019 amin'ny at 11:59 (UTC)
Coconet II, lasy ho an'i Azia Atsimo-Atsinananamomba ny zo nomerika, dia miantso ihany koa ireo izay te-hisoratra anarana handray hanatrika. Te-hanatevina laharana ireo mpamokatra sarimihetsika, mpanao gazety mpisolovava ny zon'olombelona, ary mpahay teknojìlojia avy amin'ny manerana an'i Azia ve ianao amin'ny Oktobra ka hametraka tambajotra, hampiroborobo ny fananan traikefa sy angamba mety hahita fiarahana miasa? Iangaviana ianao hitsidika ny tranonkalan-dry zareo  mba hahazo antsipirihany misimisy kokoa sy/na hisoratra anarana et o. Farany fandraisana ny fisoratrana : 11 Aogositra 2019 amin'ny 11.59 alina (GMT +8)
Misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny hetsika karakarain'ny Internet Sosiety , Vovonana 2019 Fampifandraisana Ireo Vazimba Teratany! Tanjon'ity hetsika ity ny hampivondrona ireo mpikambana avy amin'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany sy hatramin'ireo mpanome tolotra aterineto, mpikaroka, ary mpamolavola politka mba hiaraka hiasa hisian'ny fahafahana miditra tsaratsara kokoa ho an'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany ao Amerika Avaratra. Raha te-hahazo antsipirihany misimisy kokoa dia iangaviana hijery ato . Daty: 12-15 Novambra 2019 / Toerana: Hilo, Hawaii
Deaf Influence on Consumer Technology  avy amin'ny HuffPost
The Internet Opens a Window to the Deaf World  avy amin'ny HuffPost
Internet access key to protecting threatened Indigenous languages  avy amin'ny thestar.com (Toronto Star Newspapers Limited)
Community Networks Webinar 201903 Internet Society Nigeria Chapter  araka ny anoloran'ny ISOC Nigeria Chapter  azy ao amin'ny YouTube
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/13/142608/
 fanentanana amin'ny fifandimbiasana mitantana ny kaonty Twitter iray: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/08/01/a-new-rotating-twitter-campaign-will-focus-on-perspectives-of-language-activists-from-asia/
 Kpénahi Traoré: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/07/23/meet-kpenahi-traore-the-host-of-the-digiafricanlang-twitter-account-for-july-24-30/
 Christian Bwaya: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/07/30/meet-christian-bwaya-the-host-of-the-digiafricanlang-twitter-account-for-july-31-august-6/
 Victoria Gimena Tinta Quispe: https://rising.globalvoices.org/lenguas/2019/07/22/presentamos-a-victoria-gimena-tinta-quispe-anfitriona-de-la-semana-22-28-de-julio-para-actlenguas/
 Genner Llanes Ortiz: https://rising.globalvoices.org/lenguas/2019/07/28/presentamos-a-genner-llanes-ortiz-anfitrion-de-la-semana-29-de-julio-al-4-de-agosto-para-actlenguas/
 Manuel Nichim Ch'en (Manuel de Jesús Pérez Pérez): https://rising.globalvoices.org/lenguas/2019/08/04/presentamos-a-manuel-de-jesus-perez-perez-anfitrion-de-la-semana-5-11-de-agosto-para-actlenguas/
 Margaret Noodin: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/07/25/meet-margaret-noodin-the-host-of-the-nativelangstech-twitter-account-for-july-25-31/
 hitsidika ny tranonkalan-dry zareo: https://coconet.social/
 hisoratra anarana et: https://coconet.social/apply/
 hijery ato: https://www.internetsociety.org/events/indigenous-connectivity-summit/
 Deaf Influence on Consumer Technology: https://bit.ly/2ZehYSL
 The Internet Opens a Window to the Deaf World: https://bit.ly/2Y9Bq6C
 Internet access key to protecting threatened Indigenous languages: https://bit.ly/2GvNm8b
 Community Networks Webinar 201903 Internet Society Nigeria Chapter: https://bit.ly/33aKreB
 ISOC Nigeria Chapter: https://www.youtube.com/channel/UCXLrBTtLqsqXfEuQ6Jj0iaA
 Misorata anarana handray ny Taratasim-pifandraisana Rising Voices: http://eepurl.com/KfX8b